ရွှန်းစိုတဲ့နှုတ်ခမ်းတစ်စုံပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ဂရုတစိုက်လုပ်ပေးရမယ့် အချက်(၆)ချက် - For her Myanmar
ယောင်းတို့ရေ … Stella အပါအဝင် မိန်းကလေးတော်တော်များများက skincare တွေ မိတ်ကပ်တွေကိုပဲ အာရုံစိုက်နေမိကြပြီး နှုတ်ခမ်းလေးတွေကိုတော့ ဂရုစိုက်ဖို့မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ အစားမျိုးစုံစား၊ နှုတ်ခမ်းနီကာလာစုံဆိုးနဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေက ညိုမည်းခြောက်သွေ့လာရော။ အထူးသဖြင့် ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲအချိန်မျိုးမှာဆို ပိုသိသာလာပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းတွေ အဖတ်လန်တာ၊ ကွဲရှတာ နဲ့ သွေးထွက်တာတွေပါဖြစ်လာတော့တာပေါ့။ ဒါတွေကို ဖြစ်လာမှ အရပ်ကူပါလူဝိုင်းပါဆိုပြီး ကုတာထက် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒီတော့ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို တင်းရင်းလှပအောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတာကို stella နဲ့တူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
(၁) နှုတ်ခမ်းကို လျှာနဲ့သပ်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့
ရုတ်တရက် နှုတ်ခမ်းခြောက်နေတယ်လို့ ခံစားရရင် တော်တော်များများက လျှာနဲ့သပ်လိုက်ကြတယ်မှတ်လား ? ခဏတာတော့ စိုစွတ်သွားသလိုခံစားရပေမဲ့ လျှာနဲ့သပ်ခြင်းက နှုတ်ခမ်းကို ပိုခြောက်သွေ့စေပါတယ် ယောင်းရေ။
(၂) အစားအသောက်ကို မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးပါ
အသားအရေလှဖို့ အစားအသောက်ထိန်းရသလို နှုတ်ခမ်းလေးတွေအတွက်လည်း အစားအသောက်ဆင်ခြင်ရပါတယ်။ ယောင်းရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေအတွက် အများဆုံးအကျိုးပြုတာကတော့ ဗီတာမင်တွေပါပဲ။ ဗီတာမင် အေ၊ ဘီ၊ စီ၊ ဒီ၊ အီးအထိကို စုံအောင်သာစားပါ။ အသားအရေလည်းလှစေတာမို့ တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်ပေါ့။
ရေဓာတ်ဖြည့်ပါဆိုလို့ ရှည်ရှည်ဝေးမတွေးနဲ့ဦး။ ရေများများသောက်ပါလို့ ပြောချင်တာပါ။ ရွှန်းစိုတဲ့နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးဖြစ်ချင်ရင်တော့ တစ်နေ့ရေ (၈) ခွက်ကတော့ ပုံမှန်သောက်ပေးရပါမယ်။
ဘယ်တော့မှ မိတ်ကပ်မဖျက်ဘဲ မနေပါနဲ့။ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေးနဲ့တစ်ခါ မျက်နှာသစ်ပြီး တစ်ခါ မိတ်ကပ်ဖျက်ကိုဖျက်ပေးရပါမယ်။ နှုတ်ခမ်းနီတွေကိုတော့ cotton pad လေးတွေကို makeup remover ဆွတ်ပြီး ဖွဖွလေးဖျက်ပေးပါ။
Related article >>> ဒီနွေရာသီမှာ ယောင်းကို ဟော့ဖြစ်နေစေမယ့် နှုတ်ခမ်းနီအရောင်တွေက ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ??
ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေ ချောမွေ့စေဖို့ scrub လည်း လိုသေးတယ်နော်။ နှုတ်ခမ်းကို scrub လုပ်တဲ့အခါမှာ ၁ပတ်ကို ၂ကြိမ်ထက်တော့ ပိုမလုပ်မိပါစေနဲ့ယောင်းရေ။ တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုသလိုပေါ့။
(၆) Lip Balm ဆောင်ပါ
ယောင်းရဲ့ အိတ်ထဲမှာ lip balm လေးအမြဲဆောင်ထားတာ မမှားပါဘူး။ နှုတ်ခမ်းတွေခြောက်ပြီး မခံမရပ်နိုင်အောင် ကွဲအက်လာပြီဆိုရင် lip balm လေးက အသက်ကယ်ဆေးပါပဲ။
ကဲ … ဒီလောက်ဆိုရင် ယောင်းတို့လည်း ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို ဘယ်လိုဂရုစိုက်ထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို သိရှိသွားလောက်ပါပြီ။ ယောင်းတို့ကို အမြဲယုံကြည်မှုရှိရှိလှနေစေချင်ပါတယ်နော် …
ယောငျးတို့ရေ … Stella အပါအဝငျ မိနျးကလေးတျောတျောမြားမြားက skincare တှေ မိတျကပျတှကေိုပဲ အာရုံစိုကျနမေိကွပွီး နှုတျခမျးလေးတှကေိုတော့ ဂရုစိုကျဖို့မနေ့တေတျကွပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ အစားမြိုးစုံစား၊ နှုတျခမျးနီကာလာစုံဆိုးနဲ့ နှုတျခမျးလေးတှကေ ညိုမညျးခွောကျသှလေ့ာရော။ အထူးသဖွငျ့ ရာသီဥတုအပွောငျးအလဲအခြိနျမြိုးမှာဆို ပိုသိသာလာပါတယျ။ နှုတျခမျးတှေ အဖတျလနျတာ၊ ကှဲရှတာ နဲ့ သှေးထှကျတာတှပေါဖွဈလာတော့တာပေါ့။ ဒါတှကေို ဖွဈလာမှ အရပျကူပါလူဝိုငျးပါဆိုပွီး ကုတာထကျ ကွိုတငျကာကှယျထားတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ ဒီတော့ နှုတျခမျးသားလေးတှကေို တငျးရငျးလှပအောငျ ဘယျလိုထိနျးသိမျးရမလဲဆိုတာကို stella နဲ့တူတူကွညျ့လိုကျကွရအောငျ။
(၁) နှုတျခမျးကို လြှာနဲ့သပျတာမြိုးမလုပျပါနဲ့
ရုတျတရကျ နှုတျခမျးခွောကျနတေယျလို့ ခံစားရရငျ တျောတျောမြားမြားက လြှာနဲ့သပျလိုကျကွတယျမှတျလား ? ခဏတာတော့ စိုစှတျသှားသလိုခံစားရပမေဲ့ လြှာနဲ့သပျခွငျးက နှုတျခမျးကို ပိုခွောကျသှစေ့ပေါတယျ ယောငျးရေ။
(၂) အစားအသောကျကို မှနျမှနျကနျကနျရှေးပါ
အသားအရလှေဖို့ အစားအသောကျထိနျးရသလို နှုတျခမျးလေးတှအေတှကျလညျး အစားအသောကျဆငျခွငျရပါတယျ။ ယောငျးရဲ့ နှုတျခမျးလေးတှအေတှကျ အမြားဆုံးအကြိုးပွုတာကတော့ ဗီတာမငျတှပေါပဲ။ ဗီတာမငျ အေ၊ ဘီ၊ စီ၊ ဒီ၊ အီးအထိကို စုံအောငျသာစားပါ။ အသားအရလေညျးလှစတောမို့ တဈခကျြခုတျနှဈခကျြပွတျပေါ့။
ရဓောတျဖွညျ့ပါဆိုလို့ ရှညျရှညျဝေးမတှေးနဲ့ဦး။ ရမြေားမြားသောကျပါလို့ ပွောခငျြတာပါ။ ရှနျးစိုတဲ့နှုတျခမျးဖူးဖူးလေးဖွဈခငျြရငျတော့ တဈနရေ့ေ (၈) ခှကျကတော့ ပုံမှနျသောကျပေးရပါမယျ။
ဘယျတော့မှ မိတျကပျမဖကျြဘဲ မနပေါနဲ့။ ညအိပျရာဝငျခါနီးတိုငျး မိတျကပျဖကျြဆေးနဲ့တဈခါ မကျြနှာသဈပွီး တဈခါ မိတျကပျဖကျြကိုဖကျြပေးရပါမယျ။ နှုတျခမျးနီတှကေိုတော့ cotton pad လေးတှကေို makeup remover ဆှတျပွီး ဖှဖှလေးဖကျြပေးပါ။
Related article >>> ဒီနှရောသီမှာ ယောငျးကို ဟော့ဖွဈနစေမေယျ့ နှုတျခမျးနီအရောငျတှကေ ဘာတှေ ဖွဈမလဲ??
ဆဲလျသတှေကေို ဖယျရှားပေးပွီး နှုတျခမျးသားလေးတှေ ခြောမှစေ့ဖေို့ scrub လညျး လိုသေးတယျနျော။ နှုတျခမျးကို scrub လုပျတဲ့အခါမှာ ၁ပတျကို ၂ကွိမျထကျတော့ ပိုမလုပျမိပါစနေဲ့ယောငျးရေ။ တနျဆေးလှနျဘေးဆိုသလိုပေါ့။
(၆) Lip Balm ဆောငျပါ
ယောငျးရဲ့ အိတျထဲမှာ lip balm လေးအမွဲဆောငျထားတာ မမှားပါဘူး။ နှုတျခမျးတှခွေောကျပွီး မခံမရပျနိုငျအောငျ ကှဲအကျလာပွီဆိုရငျ lip balm လေးက အသကျကယျဆေးပါပဲ။
ကဲ … ဒီလောကျဆိုရငျ ယောငျးတို့လညျး ကိုယျ့ရဲ့နှုတျခမျးလေးတှကေို ဘယျလိုဂရုစိုကျထိနျးသိမျးရမလဲဆိုတဲ့ နညျးလမျးလေးတှကေို သိရှိသှားလောကျပါပွီ။ ယောငျးတို့ကို အမွဲယုံကွညျမှုရှိရှိလှနစေခေငျြပါတယျနျော …
Tags: Beauty, care, lips, makeup, tips